Searchkwụ Searchgwọ idgwọ :gwọ: Ihe Nlereanya na Njem Nleta | Martech Zone
Y’oburu n’acho enyemaka ma obu ichota ihe ichoro, odi nnukwu uzo Hero PPC, nnukwu akwụkwọ ebe Hanapin Marketing na-ekerịta nka ha. N'oge na-adịbeghị anya, Hanapin wepụtara ọmarịcha ihe ọmụma a, ihe Top Iri PPC Ndụmọdụ maka njem na njem nleta. Ọ bụ ezie na ihe eji eme njem bụ njem na njem, ndụmọdụ ndị a dị mma maka azụmaahịa ọ bụla na-achọ itinye usoro nyocha njiri mara ego na atụmatụ PPC (Pay Per Click).
Site na 65% nke ndị njem ezumike na 69% nke ndị njem azụmaahịa na-ekwu na ha na-atụgharị na weebụ iji kpebie otu ma ọ bụ ebe ha chọrọ ịga, Hanapin Marketing chere na ọmarịcha akwụkwọ ozi mara mma yana ndụmọdụ ga-arụ ọrụ ga-abụ nnukwu akụ na nduzi maka njem na njem niile. ndị ahịa.
Nke a bụ ndụmọdụ nkwụnye ụgwọ kachasị mma enyere
Iche Onwe Gị Dị Iche - Mee nyocha banyere gị asọmpi 'PPC mkpọsa ma mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị iche.
Mgbasa Ozi dịgasị iche - Kedu ebe ndị na-ege gị ntị nwere ike ịchọ? Nye otutu mkpọsa iji nwalee ma gbanwee onyinye gị.
Geo-Target - Ezipụta ebe na mpaghara ha metụtara, ma ọ bụghị na ị na-emebi ego ịkwụ ụgwọ ahịa ị na-akwụ.
Ebumnuche nke Day na Hour - Ijide n'aka na onyinye gị na-ahụ anya mgbe atụmanya na-ele ha anya nwere ike inwe mmụba dị egwu na ọnụego ntụgharị-ntụgharị.
Na-ebuli maka ROI - Inweta nnukwu okporo ụzọ nwere ike ọ dị mma mana ọ naghị akwụ ụgwọ ahụ. Nyochaa ma lekwasị anya na mkpọsa nke na-akpata ego, ọ bụghị naanị okporo ụzọ.
Atụmatụ ịgba ụgwọ - Mepụta bidding azum dabere na gị mkpọsa ebumnobi. Mmata, ịkekọrịta, okporo ụzọ na ntụgharị bụcha ihe dị mkpa, mana itinyekwu ego maka ntụgharị na-eme ka anyị nwee nghọta karịa ịzụrụ okporo ụzọ na ọnụ ahịa dị elu.
Na-ebuli Mgbasa Ozi Ngosipụta - Nyochaa ntinye mgbasa ozi ma bulie maka nlele kama iji otu ụzọ dabara usoro niile.
Remarketing - Usoro ọ bụla PPC ga-enwerịrị atụmatụ ịghagharị! Ezubere iche ndị ọbịa nọ na saịtị gị na aka ekpe ga-emezu dịkwuo akakabarede udu.
Jiri Bing - 69% nke ndị njem azụmaahịa na-atụgharị na weebụ maka ndokwa njem na 71% nke okporo ụzọ na Bing bụ naanị Bing (ọ bụghị na Google).
Na-ebuli peeji nke ọdịda - Nnukwu peeji ọdịda anaghị eme ka mmụba dị elu, ha na-ebute oke ogo dị mma nke na-eme ka mgbasa ozi gị ka mma. Na-ebuli peeji nke ọdịda gị!
Tags: hanapin ahịaakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọ ahịakwụọ ụgwọ kwa Pịaịpị pịappcppc ahịapchecheahịa search enginenjemnjem